Nke kacha mma | December 2019
Isi Nke kacha mma
Esi gbanwee adreesị email gị
N'ọnọdụ ụfọdụ, gị, dịka onye nwe igbe ozi eletrik, nwere ike ịdị mkpa ịgbanwe adreesị akaụntụ gị. N'okwu a, ị nwere ike ịme ọtụtụ ụzọ, na-ewu na atụmatụ ndị enyere site na ọrụ ozi-e. Mgbanwe nke adreesị ozi-e Ihe mbụ ị ga-ahụ bụ enweghi ọrụ iji gbanwee adreesị ozi-e na ihe ka ọtụtụ n'ime ihe onwunwe nke ụdị kwekọrọ.
Ịdị n'otu na-alaghachi na Ubuntu 17.10
Ndị ọrụ na-esochi mmezu nke Ubuntu, maara na site na mmelite 17.10, nwere aha aha Artful Aardvark, Canonical (onye na-ekesa onye nhazi) kpebiri ịhapụ ụkpụrụ Unity GUI, jiri dochie ya na GNOME Shell. Gụziekwa: Otu esi wụnye Ubuntu site na windo mbanye Ịdị n'otu na-alaghachi Mgbe ọtụtụ esemokwu dị na ntụziaka nke vector nke mmepe nke Ubuntu nkesa n'ụzọ dị anya site na Ịdị n'Otu, ndị ọrụ na-enweta ihe nke aka ha - Ịdị n'otu na Ubuntu 17.
Nzuzo nke Google search engine
Google bụ engine engine kachasị ewu ewu n'ụwa. Mana ọ bụghị ndị ọrụ niile maara ụzọ ndị ọzọ ịchọta ozi n'ime ya. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ụzọ ga-enyere gị aka ịchọta ozi dị mkpa na netwọk ahụ n'ụzọ dị irè karị. Iwu ndị bara uru maka ọchụchọ Google Ụzọ niile akọwapụtara n'okpuru a agaghị achọ ka ị wụnye ngwanrọ ọ bụla ma ọ̄ bụ ihe ọmụma ọzọ.
Ngwa ngwanrọ na-aba uru ma rụọ ọrụ, ụfọdụ mmemme ọbụna na-ekwu na ọ ga-eji dochie anya ndị ogbo ụgwọ. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị mmepe, iji kwado ụgwọ ha, "ịdọrọ" software dị iche iche na nkesa ha. O nwere ike ịbụ ihe na-adịghị njọ, ọ nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ.
Esi esi na komputa zipu SMS
Mkpa iziga ozi ederede site na kọmputa na ekwentị mkpanaaka nwere ike ibili n'oge obula. Ya mere, ịmara otú e si eme nke a nwere ike ịbara mmadụ niile uru. I nwere ike izipu SMS sitere na komputa ma obu laptọọpụ gaa na smartphone n'ọtụtụ ụzọ, nke ọbụla ga-ahụ onye ọrụ ya.
Enweghị aha na Intanet. Kedu ka ị ga-esi atụ egwu maka data gị?
Site n'ichepụta usoro ihe ọmụma, mgbe ụbọchị ọ bụla gafere, mbipụta nke anonymity na Ịntanetị na-arịwanye elu. Tinyere nke a, ebe netwọk nke netwọk na-eto eto. Ya mere, mgbe ị na-eji teknụzụ a, ị kwesịrị icheta nchedo gị na nchedo data, bụ ndị nọ n'ihe ize ndụ ọ bụla nke oge gị na weebụ weebụ.
14 Hotkeys Windows iji mee ka PC gị ọsọ ọsọ
Anyị niile maara na a na-eji ntinye arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ na mmemme na-eme ihe, mana ole na ole maara na keyboard na-eme ka o kwe omume ịgbatị ngwa ngwa nke mmemme ụfọdụ. Dịka ị nwere ike ịkọwa, anyị ga-ekwu maka Windows hotkeys, nke iji ya mee ka ndụ onye ọrụ ahụ dị mfe.
Nyochaa nyocha maka ịrụ ọrụ nke ọma ma dị mma
Ọtụtụ n'ime anyị achọpụtawo ihe karịrị otu ugboro, mgbe ogologo oge na kọmputa gasịrị, anya na-amalite ịgbu na ọbụna mmiri. Ụfọdụ ndị na-eche na okwu ahụ dị n'ime oge eji ngwaọrụ ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-atụgharị egwuregwu egwuregwu kachasị amasị gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ ruo ogologo oge, anya gị ga-emerụ ahụ.
Nhicha dị ọcha nke kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ si n'ájá
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ dị n'ime ụlọ ahụ, usoro kọmputa nwere ike ịghọ ntụ. O yiri ka ọ bụghị naanị na elu ya, kamakwa n'elu ihe ndị e tinyere n'ime. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ dị mkpa iji mechaa nhicha, ma ọ bụghị ọrụ nke ngwaọrụ ahụ ga-akawanye njọ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị kpochara kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ ma ọ bụ mee ya ihe karịrị ọnwa isii gara aga, anyị na-akwado ka ị na-ele n'okpuru mkpuchi ngwaọrụ gị.
Ihe niile ị chọrọ ịma maka gam akporo Go
Laa azụ na Mee 2017, na ihe omume maka ndị mmepe I / O nke Google, Ezi Ụlọ Ọrụ ahụ wepụtara usoro osụgharị gam akporo OS site na ngwa mmalite Go Edition (maọbụ naanị Android Go). Na ụbọchị nke ọzọ, ịnweta koodu ntinye nke ngwa ngwa bụ maka OEM ndị nwere ike ịhapụ ngwaọrụ dabere na ya.
Google weputara njikwa faili ya maka gam akporo
N'agbanyeghi na otutu ihe ngwọta maka ihicha ihe ncheta nke ama ama na oru ndi ozo bu ihe ndi ozo bu, Google kaputara mmemme ya. Laa azụ na November, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara mbipụta beta nke faịlụ Go, onye njikwa faịlụ, nke, na mgbakwunye na njirimara ndị dị n'elu, na-egosipụtakwa ngwa ngwa ngwa mgbanwe ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Gbanyụọ ọrụ ndị a na-ejighị ya mee iji mee ngwa Windows
Na nke ọ bụla nke arụmọrụ Windows na ndabara, e nwere ụdị ọrụ. Ndị a bụ mmemme pụrụ iche, ọrụ ụfọdụ mgbe niile, ebe ndị ọzọ na-agụnye naanị n'oge ụfọdụ. Ha niile n'otu ogo ma ọ bụ ọzọ na-emetụta ọsọ nke PC gị. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otú e si eme ka arụmụka nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ rụọ ọrụ site na ịhapụ nkwanye ngwanrọ dị otú ahụ.
Esi emeghe ekwentị ma ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ gị
Ugboro igwe na mbadamba nkume ndị dabeere na Android, iOS, Windows Mobile nwere ohere itinye mkpọchi na ha site na mpụga. Iji kpọghee, ị ga-achọ itinye koodu PIN, ụkpụrụ, paswọọdụ, ma ọ bụ tinye aka na nyocha mkpịsị aka (naanị dị mkpa maka ụdị ọhụrụ). Unlock nhọrọ họrọ onye ọrụ tupu oge.
10 ndị ọzọ nwere ike iji ngwa ngwa iOS ngwa
Usoro mmemme ọ bụghị ọnụahịa ọ bụla kwadoro ọrụ dị elu ma ọ bụ ịrụ ọrụ mma. Ịgagharị site na AppStore, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwa na ndenye aha, mana nke a apụtaghị na ndị ha na ha na-aga enweghị ike ịsọ mpi. Iji gosi eziokwu a, isiokwu ahụ na-enye ihe atụ kachasị mma nke iji ngwanrọ n'efu kama akwụ ụgwọ.
Otu esi amụta ngwa ngwa na keyboard
Onye ọ bụla na-Intaneti echeela: otu esi amụta itinye ọsọ ọsọ na keyboard? E nwere nnukwu ọnụọgụ nke ọrụ ịntanetị pụrụ iche site na simulators na-enyere gị aka ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma ịmụta ọrụ a. Nke ahụ bụ naanị otu simulator software agaghị ezu.
Esi mee ka Windows 10 dịkwuo mfe
Ụzọ kachasị mfe iji mee ka ọrụ gị rụọ ọrụ na kọmputa bụ ịzụta ihe ndị ọzọ "dị elu". Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị wụnye diski SSD na nhazi dị ike na PC gị, ị ga-enweta mmụba dị ịrịba ama na arụmọrụ usoro na ngwanrọ eji. Otú ọ dị, ị nwere ike ime dị iche. Windows 10, nke a ga-atụle n'isiokwu a - n'ozuzu, ezigbo smart OS.
Kedu ka ndị agha na-eme ego na ihe nchọgharị gị
Kwa ụbọchị, ndị na-awakpo na-eji usoro aghụghọ na ụzọ ndị ọzọ na-eme onwe ha ka ha nwee onwe ha. Ha agbagharaghị ohere iji nweta ego na egwupụta egwu. Ndị na-agba ọsọ na-eme nke a site na iji saịtị dị mfe. Enweghi ike inweta ego na koodu puru iche nke na-eweputa cryptocurrency maka onye nwe ya mgbe ndi ozo ozo na-agaghari na ibe.
Anyị na-achọ ekwentị furu efu
Ekwentị gị nwere ike ịfu ma ọ bụ zuo ohi, ma ị ga-ahụ ya n'enweghị ihe isi ike dị ukwuu, dịka ndị mmepe nke smartphones na usoro nhazi na-elekọta ya. Ọrụ nke usoro nyochaa Na smartphones niile nke oge a, a na-ewu usoro ntọala ebe - GPS, Beidou na GLONASS (njedebe a na-emekarị na China na Russian Federation).
Zute: Alice - onye enyemaka olu Yandex
Ọ bụ ụlọ ọrụ Yandex nke ụlọ ahụ mere nzọụkwụ ọhụrụ maka ndị asọmpi si mba ọzọ na IT. Onye Russia na Siri na onye enyemaka Google bụ onye inyeaka olu "Alice." Dị ka ozi mmalite, a maara na mmeghachiri ederede anaghị ejedebe n'oge ahụ ma a ga-emelite ya na nsụgharị ndị ọzọ.
Otu esi eme ka Telegram site na ihe egwu
Imirikiti ndị ọrụ mara Telegram dịka onye ozi ọma, ma ha amaghịdị na, na mgbakwunye na ọrụ ya, ọ nwekwara ike dochie ọkpụkpọ ọkpọ ọhụụ. Isiokwu a ga-enye ọtụtụ ihe atụ nke otu esi agbanwe usoro ihe a n'ụzọ dị otú a. Ịmepụta ekwentị Telegram Ị nwere ike ịhọrọ naanị ụzọ atọ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Nke kacha mma 2019